Piva Rivaroxaban (366789-02-8) hplc ma98% | AASraw R & D Reagents
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Rivaroxaban ntụ ntụ
SKU: 366789-02-8. Category: R & D mmeghachi omume
Molekụla Formula: C19H18ClN3O5S
Ọbara arọ: 435.88
Na 2015, Rivaroxaban ntụ ntụ weere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke akụkọ ndị a kọrọ akụkọ ya banyere mmerụ ahụ dị njọ na ọgwụ ndị a na-eme mgbe niile iji mee ka FDA si na System Reporting System (AERS).
Rivaroxaba nke Bayer bu ụzọ mepụta., E gosipụtara maka igbochi venous thromboembolic events (VTE) na ndị ọrịa bụ ndị natara ngụkọta hips replacements na ngụkọta ikpere ndochi; igbochi ọrịa strok na ntinye ihe na-arịa ọrịa na ndị na-arịa ọrịa na-emeghị ihe ọ bụla; ọgwụgwọ nke thrombosis miri emi (DVT) na mgbọrọgwụ ọkụ (PE); iji belata ihe ize ndụ nke DVT na / ma ọ bụ PE. N'ihi enweghị ọmụmụ ihe nchekwa, a naghị akwado ya maka iji ndị nọ n'okpuru 18 afọ. A naghị atụ aro ya na ndị enweghi mmerụ ahụ (<30mL / min).
a na-egosi varoxaban maka mgbochi ihe omume thromboembolic venous (VTE) na ndị ọrịa bụ ndị gbanyelarị hips replacements na ngụkọta ikpere na-agbanwe ihe; igbochi ọrịa strok na ntinye ihe na-arịa ọrịa na ndị na-arịa ọrịa na-emeghị ihe ọ bụla; ọgwụgwọ nke thrombosis miri emi (DVT) na mgbọrọgwụ ọkụ (PE); iji belata ihe ize ndụ nke DVT na / ma ọ bụ PE. N'ihi enweghị ọmụmụ ihe nchekwa, a naghị akwado ya maka iji ndị nọ n'okpuru 18 afọ. A naghị atụ aro ya na ndị enweghi mmerụ ahụ (<30mL / min).
Gịnị Bụ ọgwụ ọjọọ Rivaroxaban ntụ ntụ (Xarelto) Jiri Maka?